Stakeholder Engagement | Reef Resilience
Hevitra manan-danja eo amin'ny fanoloran-tena
Ireo mpandray anjara dia tokony hifanaraka amin'ny drafitra manontolo.
Ny fampidirana ireo mpandray anjara mialohan'ny fizotran'ny famerenana amin'ny laoniny (izany hoe, mandritra ny dingana fanomanana) dia afaka manampy ny tetikasa hampifanaraka amin'ny tanjona maromaro izay mety tsy noheverina ho nisy. Satria ireo mpandray anjara samihafa dia mety hifaninana tombontsoa, ​​ilaina ny mampifanaraka ireo fahasamihafana ireo mba hisorohana ny fifandonana mety.
Ny fampifandraisana ireo mpandray anjara sy ireo vondrom-piarahamonina amin'ny ambaratonga voalohany dia afaka mandrisika ny fitantanana eo an-toerana ho an'ny tranokala fanarenana noho ny fahatsapana ny fananana tetikasa. Ny fametrahana ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana miaraka amin'ny fizaràna iombonana amin'ny tetikasa dia tena zava-dehibe amin'ny fahombiazana sy ny faharetana. Ny fanaovana izany dia mety hitarika amin'ny fitantanana ny harena, ref ary manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana amin'ny fanomezana fanampiana ny zana-tsokajy, ny fikojakojana ny zana-pokonolona, ​​ary ny fandehan'ny mpiasa an-tsitrapo. Any belize, ohatra, ny fikambanana misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFragments of Hope dia manome fivelomana hafa ho an'ny mpanjono sy ny fizahan-tany mandritra ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana ary manana ny toeram-piasana miorina amin'ny famerenana ny haran-dranomasina izay manana tompon-daka amin'ireo vatohara naverina indray.
Ny fahasarotana mifandraika amin'ny famerenana amin'ny famokarana ny haran-dranomasina dia tokony ho takatra eo anivon'ireo mpiara-miasa rehetra alohan'ny fampiharana ilay tetikasa. Ohatra, ny hetsika fiovan'ny toetr'andro na ny fipoahan'ny mpamono dia mety hiteraka fahavoazana lehibe ho an'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny, saingy matetika no tsy mifehy ny mpitsabo amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny fifanakalozana ireo loza ireo sy ny fomba hitantanana azy ireo na ny fanalefahana dia afaka mametraka ny hevitra sy ny andrasana marina ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny tetikasa.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Reef Restoration amin'ny Internet (jereo ny Lesona 1: Fampidirana amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny drafitrasa momba ny drafitrasa)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVahaolana ara-tontolo iainana amin'ny fahasimbana amin'ny vatohara: Manatsara ny famerenana amin'ny laoniny ny vatohara any Karaiba sy ny Atlantika Andrefanamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFragments of Hope
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Fandaharan'asan'ny Fandaharan'asan'ny Coral Restoration Foundation